भाषा कम्प्युटिङ र अरण्य रोदनः गुहार गुहार भन्नुपर्ला जस्तो छ
scheduleआइतवार आश्विन ७ गते, २०७५
स्तम्भ: भाषा, प्रविधि र भाषाप्रविधि
कम्प्युटर वा धातुको प्लेटले आफैं काम गर्न सक्दैन । यस धातुको प्लेटलाई कुनै न कुनै भाषा सिकाएरै यसले काम गर्न सकेको हो । सुरुदेखि नै कम्प्युटरलाई अङ्ग्रेजी भाषा सिकाइएको हुनाले कम्प्युटरले अङ्ग्रेजी मात्र बुझ्दछ भन्ने धारणाले सूचना प्रविधिका क्षेत्रमा जरो गाडेको हो । भाषा प्रविधिका क्षेत्रमा ध्वनि, वर्ण, शब्द, बोली आदिलाई निश्चित कोडविन्दुमा व्यवस्थित गरेर कम्प्युटरलाई बुझाउन सकिन्छ । यो प्रकृया निकै लामो र झन्झटिलो हुन्छ । रोमन लिपिमा मात्र कम्प्युटरमा प्रविष्टि दिन सकिन्छ भन्ने सोच अङ्ग्रेजी सम्वत् १९९२ सम्म कायमै थियो । जुनसुकै मानव भाषाका माध्यमबाट कम्प्युटरमा प्रविष्टि दिन सकिन्छ भन्ने तथ्य बाहिर आएपछि विभिन्न देशले विभिन्न भाषाबाट कम्प्युटर सञ्चालन गर्ने प्रविधिको विकास गरे । अहिले रोमन लिपिमा लेखिने अङ्ग्रेजी, जर्मन, फ्रेन्च, स्पेनिसमा त कम्प्युटर राम्ररी चलाउन सकिन्छ भने रोमन इतर लिपिका सिजेकेका नामले चिनिने चाइनिज, जापनिज र कोरियन जस्ता भाषामा पनि अङ्ग्रेजीको जस्तै गरेर कम्प्युटरबाट भाषिक, साहित्यिक, वैज्ञानिक काम सम्पादन गर्न सकिन्छ । भारतमा चाहिँ अङ्ग्रेजी र हिन्दी भाषाको खिचातानीले गर्दा हिन्दीमा त्यति राम्रो विकास हुन सकेन । तर हालको दशकमा हिन्दीमा पनि धेरै काम भएको छ । अहिले भारत ७ वटा भाषामा बहुभाषिक कम्प्युटिङको काम गर्न थालेको छ । हिन्दी जस्तै नेपाली भाषा देवनागरीमा लेखिने भएकाले कम्प्युटरमा वर्ण रेन्डरिङको समस्या छैन भन्न सकिन्छ । तर नेपाली भाषामा डिजिटल वर्ण मानकीकरण नभएकाले विदेशी सफ्टवेयर कम्पनीले बनाएका कम्प्युटर अनुप्रयोगहरूमा नेपाली भाषा रेन्डरिङको समस्या छँदैछ ।
भाषा कम्प्युटिङका आधारभूत मान्यतालाई अघि बढाउन सर्वप्रथम नेपाली भाषाका वर्णको मानकलाई पहिल्याउनु जरुरी हुन्छ । सुरुमा नेपाली भाषाका वर्णको मानक बनाउन सके क्रमश: अन्य भाषाको काम अघि बढाउन सजिलो हुन्छ । नेपालमा हाल १२३ राष्ट्रभाषा छन भनिएको छ । सरकारी कामकाजको नेपाली भाषाबाट भाषाप्रविधिको काम सुरु गर्न सके अन्य राष्ट्रभाषाको मानकीकरणको विकास गर्न एउटा साझा मञ्चको निर्माण गर्न बाटो फराकिलो हुनेथियो ।
प्रविधिमा नेपाली भाषाको प्रविष्टिका क्रममा देखिने कामहरू जस्तै एकीकृत लगत प्रणाली, वर्ण क्रमबद्धता वा अक्षरानुक्रम, भाषा अनुवाद, ढाँचा अन्तर्परिवर्तनीयता आदिका लागि एउटा प्रविष्टि मानक वा मानक किबोर्ड वा मानक कुञ्जीपाटी संरचनाको जरुरी हुन्छ । भाषाप्रविधिको पहिलो कक्षा भनेको भाषामा भएका वर्णहरुलाई कम्प्युटरले पहिचान गर्नु हो । यसलाई वर्ण सङ्केतन (क्यारेक्टर इन्कोडिङ) भनिन्छ । भाषा प्रविधिमा वर्ण सङ्केतन मानकीकरण भन्नाले प्रविधिमा भाषाको प्रविष्टिमा एकरुपताको मापदण्ड तयार गर्ने भन्ने अर्थमा लिनु पर्ने हुन्छ ।
वर्ण सङ्केतन भनेको भौतिक रूपमा लिखित अक्षर र ती अक्षरको ध्वनि प्रतिनिधत्व गर्ने प्रविध हो । भाषाप्रविधिको दुनियामा यसलाई वर्ण स्वरूप (ग्लिफ) भनिन्छ । वर्ण सङ्केतन शब्द अमुर्त अवधारणा होइन तर कम्प्युटर कोडमा मानक बनाउनु पर्छ भन्ने जानकारीका अभावमा यो शब्द अमुर्त जस्तो देखिन्छ । वर्ण सङ्केतनले आकारको तुलनामा भन्दा अर्थको आधारमा बढी महत्व राख्छ ।
कुनै भाषामा सञ्जाल पृष्ट (वेभपेज) उत्पादन गर्न खासै समस्या हुँदैन । समस्या त्यतिखेर देखिन्छ जतिखेर त्यस सञ्जाल पृष्टलाई अलग अलग देशमा खोलेर अलग अलग मातृभाषीले जानकारी लिनुपर्छ वा बारम्बार सम्पादन वा परिमार्जन गर्नुपर्छ । किनभने सबै देशमा कम्प्युटरमा काम गर्ने मानिस बहुभाषी हुँदैन । कम्प्युटरले त्यस सञ्जाल पृष्टलाई आफूले चाहेको भाषामा स्वत: अनुवाद गरिदिने अवस्था भए सन्सारको कुनै भाषाको ज्ञान पाठकलाई उपलब्ध हुनसक्छ । यस्तो प्रविधिको अभावमा पाठकले धेरै भाषा सिकरे ती ती भाषाको ज्ञान लिनुपर्ने हुन्छ जुन कुरा आजको समयमा कल्पना पनि गर्न सकिँदैन ।
तर दुभार्ग्य नै भन्नु पर्ला नेपाली नीति निमार्ताहरूले सञ्जाल मानकको अर्थ बुझेर पालना नगरेका कारणले भाषाप्रविधिमा सुधार आउन सकेको छैन । भाषा सङ्केतन मानक नियमावलीको अभावमा यस्तो पद्धति लागु गर्न सकिँदैन । एकातिर सूचना प्रविधिको विकासले बहुभाषिक पाठ सम्पादक, नेपाली भाषा सक्षम ब्राउजर जस्ता सहायक अनुप्रयोगहरूको निर्माण नेपाली भाषामा सम्भव हुन थालिसकेको छ भने अर्कातिर कम्प्युटरमा पुरानै परिपाटीमा लेख्नु छाप्नु पर्ने बाध्यता छँदैछ ।
सभ्यताको सुरुदेखिनै मानिसले भाषाको प्रयोग गरेको पाइन्छ । सुरुका शताब्दी वा शहश्राब्दीहरूमा मानिसले बोलीका माध्यमबाट भाषिक ब्यवहार गर्थ्यो भने खेती गर्ने निश्चित स्थानमा झुपडी बनाएर बस्न थालेपछि सङ्केतका चिन्हहरूको विकास गर्यो र लिखित भाषाको निर्माण भयो । लिखित भाषाको निर्माण हुँदै गर्दा लिपिमा भएका वर्णहरूलाई निश्चित आकार दिएर वर्णलाई निश्चित सङ्ख्यामा नियमन गरियो । विकास क्रमसँगै भाषाका वर्णहरूलाई एकरुपता दिन पहिले हस्त लेखन त्यसपिछ टाइप राइटर र हाल कम्प्युटरमा नियमन गर्नु पर्ने भएको छ । भाषाप्रविधिमा काम गर्दा तोकिएको वा दिइएको भाषाका सबै मानव बोलीमा आउने बोलीको वा ध्वनिको प्रतिनिधत्व हुनेगरी सीमित सङ्ख्यामा वर्ण निधार्रण गरिएको हुन्छ । वर्ण सङ्केतन पद्धतिमा त्यस्ता प्रत्येक वर्णर्लाई अङ्कको भार दिएर निश्चित अङ्कमै ढालिन्छ र ती ती वर्णको अङ्कका आधारमा गणना गरेर कम्युटरले बुझ्दछ । त्यसैले कम्प्युटर भाषाविज्ञानलाई गणितीय भाषाविज्ञआन पनि भनिन्छ । कम्प्युटर विकासको सुरुसुरुमा रोमन लिपिमात्र काम गरिने हुनाले रोमन लिपिलाई लक्षित गरेर सूचना आदान प्रदान गर्न अमेरिकी मानक (आस्की) को मानकीकरण भयो ।
युनिकोडको विकास भइसकेपिछ आस्कीको प्रचलनमा कमी आयो । आस्कीमा १२६ वर्णलाईमात्र चिनाउन सकिने हुनाले सन्सारका अन्य भाषाका वर्णलाई समेत चिनाउन युनिकोढको विकास भयो । युनिकोडमा वर्णर्हरूलाई निश्चित तालिका बमोजिम अङ्कमा ढालेर सङ्केतन गरिएको हुन्छ । प्रायजसो अनुप्रयोगगहरूले युनिकोड देवनागरी वर्ण युटिएफ -८ मा भण्डारण गरेको हुन्छ । आवश्यकता अनुसार युटिएफका अन्य संस्करणहरूमा पनि राख्न सकिन्छ । युनिकोड प्रणालीमा गइसकेपछि एकठाउँमा बनाएको कागजात (डकुमेन्ट) अर्को कम्प्युटरमा लैजाँदा कहिले फन्ट निमल्ने र कहिले एउटा फन्टमा गरेको कुरा त्यो फन्ट नभएको कम्प्युटरमा खोल्न नसिकने, खुलिहालेमा पनि विगार्ने जस्ता विभिन्न समस्याको समाधान हुन्छ ।
वर्ण व्यवस्था मानकीकरण गर्न तोकिएको वा दिएको भाषाका वर्णहरूलाई समूहमा राख्नुपर्छ । वर्ण सङ्केतन समूह भनेको वर्ण वा अक्षरको एउटा सङ्ग्रह हो जसलाई कम्प्युटर अनुप्रयोगका माध्यमबाट यसरी काम गर्ने भनेर कम्प्युटरलाई काम लगाउन सकिन्छ । वर्ण सङ्केतन समूहमा प्रत्येक वर्णका लागि एउटा अङ्क प्रतिस्थापन गरेर त्यस वर्णको वास्तिवक स्वरुप वा आकार र त्यसले प्रतिनिधित्व गर्ने ध्वनिसँग मापन गरिन्छ । यसरी मापन गरिएको वर्णको प्रतिनिधत्व गर्ने अङ्क कम्प्युटरको मस्तिष्कमा सङ्ग्रहित हुन्छ । अनि कृत्रिम बुद्धिका सहायताले त्यसको विश्लेषण गरेर यी यी वर्णको यो क्रम, यो क्रमबद्धता ठिक यो क्रमबद्धता बेठिक भनेर मानिसले जस्तै कम्प्युटरले पनि भाषाज्ञानको अनुमान लगाएर काम गर्न थाल्छ ।
युनिकोड कन्सोर्टियमले प्राय सबै आधुनिक भाषाका वर्णको मानक र पाठको मापदण्ड निर्दिष्ट गर्दछ । युनिकोड भनेको एउटा अन्तर्राष्ट्रीय मापदण्ड (मानक) बनाउने वैश्विक संस्था हो जसले कम्प्युटर लगत सुरक्षणको काम, विभिन्न भाषाका युनिकोड वर्ण बीच सम्बन्ध परिभाषित गर्ने, त्यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय मानकहरुसँग मिलान गर्ने काम गर्दछ । युनिकोड मानकले विभिन्न संस्करण पार गर्दै हाल नवीनतम विद्युतीय संस्करण १० दशमलब सून्य संस्करणमा आइ पुगेको छ ।
युनिनकोड मानकमा वर्णहरूको निश्चित सङ्केतन योजना हुन्छ । मानक वर्ण सङ्केतन पद्धतिले कुनै पनि भाषामा चाहिने आवश्यक अक्षर प्रदान गर्दछ । यसमा मिश्रित वर्ण सङ्केतन योजना पनि हुन्छ । जस्तै ल, ळ र ऴ वर्णलाई देश र क्षेत्र अनुसार फरक रुपमा प्रयोग गर्न सकिने प्रावधान रहेको हुन्छ ।
परम्परागत रूपमा भन्दा युनिकोडमा टाइप गर्न, भण्डारण गर्न, अनुक्रम मिलाउन धेरै सिजलो हुन्छ । अङ्ग्रेजी र नेपालीका अक्षरहरूलाई मिसाएर लेख्न र चाहिए अनुसार बदल्न पनि सकिन्छ । अर्थात एकै ठाउँ, एकै हरफमा समेत दुई वा तीन भाषाका वर्णलाई मिसाएर लेख्न सकिन्छ । कम्प्युटरमा फाइल, फोल्डर आदिको नाम पनि नेपालीमै दिन सकिन्छ । टिटिएफ वा ट्रुटाइप फन्ट अर्थात पुरानो टाइप फन्टमा लेख्दा कम्प्युटरको पर्दामा एउटा कुरा देखाउने तर भण्डारण गर्दै अर्कै कुरा थन्क्याउने हुन्थ्यो । जस्तै ए एस डि एफ जी टाइप गर्दा कम्प्युटरको पर्दामा ब क मा न देखाउने तर भण्डारण चाहिँ ए एस डि एफ जी नै गर्ने हुन्थ्यो । यस्तो पद्धतिमा आफूले राखेको लगत डाटा निश्चित अनुक्रममा मिलाएर राख्न नसकिने हुन्थ्यो । यौटा व्यक्तिले टाइप गरेको कुरा अर्को व्यक्तिले खोल्न, चलाउन परे त्यही फन्ट चाहिने हुन्थ्यो । नेपालमा एक समय यस्तो पनि आयो जहाँ नेपाल सरकारको सचिबले विभिन्न देशका राजदूतलाई यो फन्ट र त्यो फन्ट पठाएर दिन बिताउनु पर्थ्यो । हालसम्म पनि नेपाली भाषामा दैनिक ठुलो व्यबहार गर्नुपर्ने संस्थाले यस्तो परिपाटीनै चलाई रहेकाछन् । श्रद्धाले दिने तिलाञ्जलिलाई रिप लेख्ने चलन त आयो तर प्रीति फन्टको भूतले धामीझाक्रीलाई समेत चकित पारेको अवस्थआ छ ।
युनिकोडमा सन्सारभरि एउटै मान चलाइने हुँदा नेपाली फन्ट नभए पनि कम्प्युटरको पूर्वनिर्धारित युनिकोड फन्टले फाइल खोल्न र पढ्न सकिन्छ । नोटप्याड, एक्सेल, फ्रन्टपेज, एडोब जुनसुकै अनुप्रयोगमा पनि चल्छ । नेपालीमा इमेल पठाउन सकिन्छ । नेपालीमा ‘च्याट’ गर्न सकिन्छ । नेपालीमा सञ्जाल पृष्ट बनाउन, हेर्न, पढ्न सकिन्छ । नेपाली शब्द नै प्रयोग गरेर सञ्जालका गुगल, याहु लगायत वेभसाइटमा चाहिएको कुरा खोज्न पनि सकिन्छ ।
युनिकोड वर्ण प्रविधिमा आस्कीभन्दा फरक कोड वा कोड विन्दुमा मापन गरेर अलग्गै नाम दिइन्छ । युनिकोडमा वर्णलाई ध्वन्यात्मक लिपि, प्रतीक चिन्ह, उपवर्ण र विराम चिन्ह आदि विभाजन गरेर राखिएको हुन्छ । उच्चारण नहुने तर लेखनका लागि चाहिने विशेष चिह्नलाई समेत चिनाउन सकिन्छ । जस्तै सेल्सियस डिग्री, गिणतीय चिन्ह, ज्यामितीय आकार आदि आदि । नेपाली भाषालाई युनिकोड वर्णका आधारमा विश्लेषण गर्दा वर्ण वा अक्षरका चिन्हहरुमा विभाजन गरेर प्रत्येक अक्षरलाई अलग्गै कोडले चिन्न र व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ ।
युनिकोडको प्रयोगले नेपाली र अङ्ग्रेजीमा टाइप गिरएका कुरा वर्ण (फन्ट) मिसिएर नबुझिने वा कोठा कोठा देखिने समस्या पूणर्रूपले समाधान हुन्छ । युनिकोड प्रयोग गरी नेपाली भाषामा मेसिनले पहिचान गर्न सक्ने सूचना ट्यागिङ, विद्युतीय शब्दकोश निर्माण, ईसरकारका आवेदन फरम सहितका सामग्री आदिको विकास गर्न सकिने हुनाले नेपाली भाषालाई पनि मानकीकरण गरेर विश्वव्यापी सञ्जालको आधिकारिक मानक संस्था आइएसओ (अन्तर्राष्ट्रिय मानक संस्था) सँग सहकार्य गर्नु आजको अपरिहार्य काम भएको छ ।
स्थानीय लगत भण्डारण (सिएलडिआर) लाई विश्वव्यापी पहिचान दिएर सञ्चालन गरिने प्रविधिमा भौगोलिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, भाषिक, तिथि, मिति, पात्रो जस्ता कुरा कम्प्युटरलाई पढाउन, बुझआउन सकिन्छ । प्राय सबै प्रमुख कम्प्युटर सञ्चालन (अपरेटिङ्) प्रणाली, ब्राउजर, सम्पादक, शब्द प्रोसेसर र अन्य अनुप्रयोगहरू र उपकरणले युनिकोड वर्णलाई राम्ररी सम्पादन गर्न सक्दछन् ।
पाठ सम्पादक, ब्राउजर, जस्ता सहायक अनुप्रयोगहरूको निर्माण नेपाली भाषामा सम्भव हुन थालिसकेको छ । करिब एक दशक अघिदेखि नेपाली भाषामा स्थानीयकरणको प्रयास भएता पनि माइक्रोसफ्ट, लिनक्स जस्ता बहुप्रचलित कम्प्युटर प्रणालीमा नेपाली भाषाका इन्टरफेस निमार्ण हुन सकेको छैन। नेपाली भाषाको जटिलतालाई बेलैमा सम्बोधन गरेर मानक निर्माण गरी एकरूपता ल्याउन सके नेपाल सरकारले ल्याएको इसरकारको अवधारणा नेपाली भाषामा चलाउन सकिन्छ । नत्र इम्बोस्ड नम्बर अङ्ग्रेजीमा राखे जस्तै इसरकार पनि अङ्ग्रेजी मै चलाउनु पर्छ । एकचोटी वैश्विक सञ्जालमा पसेपछि त्यहाँबाट फर्किन सकिँदैन । कि अङ्ग्रेजीमा इसरकार चलाउनु पर्ने कि सरकार चलाउन सकिन भनेर दातृसंस्थालाई जिम्मा लगाउनु पर्ने दिन आउन सक्छ । इम्बोस्ड नम्बर अङ्ग्रेजीमा, नापी विभागको नक्सा क्याप्सन अङ्ग्रेजीमा, आफ्नो ग्राहक चिन (नो योर कस्टमर) अङ्ग्रेजीमा, राष्ट्रिय परिचय पत्र अङ्ग्रेजीमा, यो पनि अङ्ग्रेजीमा, त्यो पनि अङ्ग्रेजीमा भएपछि इसरकार पनि अङ्ग्रेजीमा चलाउनु पर्छ र अङ्ग्रेजी भाषालाई नै नेपालको सरकारी काम काहको भाषा बनाइदिए नेपाली र नेपालका अन्य भाषालाई कम्प्युटर सक्षम बनाउने झन्झटनै समाप्त हुन्छ भन्ने मानसिकता भएका नीतिनिर्माता पनि नभएका चाहि होइनन्। वतर्मान प्रचलनमा गैर मानक पद्धतिबाट कम्प्युटर सञ्चालन भएको हुँदा कम्प्युटरमा देखिनु पर्ने सरकारी कामकाजको भाषा कम्प्युटरले अध्याहार गर्न नसक्ने अवस्थामा छ । कम्प्युटरमा सङ्ग्रहित लगतको प्रारुप पिरवर्तन गर्नु परेमा सञ्जाल पृष्ठ नै आनका तान फरक पारेर देखाइिदने समस्या विद्यमान छ । त्यसैले राष्ट्रिय / अन्तरराष्ट्रिय मानक संस्थासँग सहकार्य गरी नेपाली भाषाका वर्णको मानकमा एकरूपता ल्याएर यस्ता समस्या समाधान गर्न सकिन्छ ।
कम्प्युटर प्रणालीमा नेपाली भाषाको पहुँच पुर्‍याउन नेपाली भाषाका अनुप्रयोगहरू वेब र मोबाइल प्लेटफारमहरु नेपाली भाषामा निर्माण गरी डिजिटल विभाजन न्युन गर्नु आजको आवश्यकता हो । यो एउटा दुइटा कर्मचारीलाई जिम्मा दिएर गर्न सकिने काम होइन । यो काम गर्न दूरदृष्टि, लगनशीलता र प्रविधि भित्र्याउने इच्छा चाहिन्छ । भाषाप्रविधि मानक ब्यूरो वा नेपाली प्रविधि मानक संस्था निर्माण गरी अन्तर्राष्ट्रिय मानक संस्थाहरूसँग समन्वय गरी काम गर्न राष्ट्रिय तवरबाटै वर्ण निर्धारण, वर्ण पहिचान, नेपाली देवनागरी कीबोर्ड लेआउट निर्माण गरेर कम्प्युटरमा नेपाली भाषाको प्रविष्टिमा सरलता ल्याउनु पर्छ । मानक नबनाई पनि काम त हुन्छ तर पद्धति बिनाको कामले हामीलाई अँध्यारोमा लगेर धकेलिदिन्छ । मानकीकरण गरेर अगाडि बढ्न सके समान प्रकृतिका कामको दोहोरो खचर्बाट राष्ट्रको भार कम गराउँन सकिन्छ ।
वर्ण सङ्केतन मानकीकरणका लागि अन्तर्राष्ट्रीय सङ्गठन (आइएसओ), भाषिक लगत संस्था (एलडिसी) जस्ता संसारका भाषाप्रविधि हर्ने संस्थासँग सहकार्य गर्न सके नेपाली भाषाप्रविधि मानकलाई पनि वैश्विक बजारमा चिनाउन सकिने थियो । यसैगरी डब्लुथ्रिसि, मिसन इन्टरनेट सञ्जाल, को सदस्यता प्राप्त गरेमा नेपालीमा इन्टरनेट सञ्जालको विकासमा ठुलो सहयोग पुग्छ । युरोपेली भाषा संसाधन स्रोत संस्थाले मानव भाषा प्रविधिका क्षेत्रमा स्रोत संसाधन प्रवर्द्धन गर्न, भाषा इन्जिनियरिङ प्रविधिको मूल्याङ्कन आदिको धेरै काम गरेको छ । हामीले पनि राम्रा कामको अनुशरण गर्न सक्छौँ । भाषाप्रविधि मानकीकरणका लागि अन्तरराष्ट्रीय सङ्गठन ( आईएसओ ) सँग सहकार्य गर्न, अन्तर्राष्ट्रिय मानकीकरण गतिविधिमा भाग लिन, स्थानीयकरण मुद्दाका विशिष्ट क्षेत्रहरुबारे सम्बोधन गर्न नेपाली भाषा प्रविधि मानक ब्यूरो अर्थात नेपाली भाषाका लागि प्रविधि मानक तयार गर्न विशेषज्ञ समितिको आवश्यकता देखिन्छ । विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय आइटी विभाग आदि अब त समाप्त पारियो । शिक्षा मन्त्रालय, नेपाल एकेडेमी, त्रिभुवन विश्वविद्यालय, काठमाडौँ विश्वविद्यालय, नास्ट जस्ता मानकीकरणको विकासका लागि शीर्ष निकाय, संस्थाले भाषाप्रविधिमा केही जबाफदेहिता लिनु पर्दैन ? दूरदराजको कुनै चिसो छिँडीमा एउटा दुइटा भोका नेपालीले चिच्याएर यो काम सम्भव पनि हुँदैन । अब त बाहिर निस्किएर गुहार गुहार भन्नुपर्ला जस्तो छ ।
नेपालमा भाषा कम्प्युटिङ र कल्पनाको लड्डू
भनीसाध्य छैन भाषाको समस्या
‘जनतालाई व्यवस्थापन गर्न गएका नेता आफैं व्यवस्थित भए’
करको करकर र ‘राक्षसी राज्य’को रिर्हसल
डाक्टरहरुको लापरबाहीविरुद्ध बोल्न किन पाईदैन ?
भाषाको भण्डारमा प्रविधिको ग्रहण
पप्पुलाई फेरि नयाँ सरकारी ठेक्का
काठमाडौँ, ७ असोज । दर्जनौं पुल र सडक अलपत्र पार्ने पप्पु कन्स्ट्रक्सनले फेरि २ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको सरकारी ठेक्का पाउने...
फेसबुक लफडाः पुर्वडिएसपीविरुद्ध बुहारीको उजुरी
काठमाडौँ, ७ असोज । सामाजिक सञ्जाल फेसबुक म्यासेन्जरमार्फत जेठाजुले बुहारीलाई आपत्तिजनक शब्द प्रयोग गरेको उजुरीमा प्रहरीले...
काठमाडौं, ७ असोज । सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयले ‘पोर्न साइट’ बन्द गराउने भएको छ । मन्त्रालयले यस्ता वेबसाइट बन्द...
एजेन्सी, ७ असोज । रियल मड्रिडका स्टार खेलाडी तथा यूरोपियन वर्ष खेलाडी लुका मोड्रिचलाई क्रोएशियाको एक अदालतले कर छली गरेको...
बुढिगण्डकी फेरि चिनियाँ कम्पनीलाई
काठमाडौं, ७ असोज । सरकारले १२ सय मेगावाट क्षमताको बुढिगण्डकी जलविद्युत आयोजना निर्माणको जिम्मा फेरि चिनियाँ कम्पनीलाई दिने...
भारतले अहंकारी अभिव्यक्ति दिएको भन्दै इमरान दुःखी
इस्लामावाद, पाकिस्तान, ७ असोज । नयाँ दिल्लीले भारत–पाकिस्तान विदेश मन्त्रीस्तरको प्रस्तावित वार्ता तत्काल हुन नसक्ने बताएको...